Gudiga doorashada iyo shuruudaha musharaxiinta oo nababar ku noqday - Xusuus
Saturday, 1 September, 2012 I Latest Update 10:40 pm Home
Xidigaha Muqdisho Saciid Daa’uud Cali Masxaf iyo Surqo C/laahi Surqo yareey oo hees macaan oo muuqaal qurux badan leh soo bandhigay. Tweet
Home Featured Wararka maanta
Gudiga doorashada iyo shuruudaha musharaxiinta oo nababar ku noqday
By: xusuus, Post on:1 September, 2012, Share this story
Guddiga doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa maanta soo saaray shuruudaha looga baahan yahay murashaxiinta u tartamaya xilkan, waxaana shuruudaha ka mid ahaa in murashax walba uu bixiyo 10,000 oo doollar oo diiwaan-gelin ah.
Afhayeenka guddiga doorashada, Cismaan Libaax Ibraahim oo kulan ay yeesheen kaddib la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in muwaadin kasta oo Soomaali ah uu u tartami karo xilka madaxweynenimo ee dalka, balse loo baahan yahay inuu yahay qof aa dambi culus oo ay maxkamadi xukuntay, aysanna da’diisu ka yaraan 40-sano.
“Musharax walba waxaa laga doonayaa inuu soo gudbiyo arjigiisa iyo warqad ay ku caddatay taariikhdiisa waxbarasho iyo midiisa shaqo, waana inuu yahay qof karti iyo aqoon u leh howsha loo dhiibayo,” ayuu yiri xildhibaan Cismaan Libaax.
Guddiga doorashada ayaa waxay shalay shaaciyeen in 10-ka bishan September ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo shuruudaha lagu xiray murashaxa ay ka mid yihiin inuusan ahayn qof dhimirka wax ka qaba.
Afhayeenka guddiga oo saxaafaddu ay wax ka weydiisay arrintan ku saabsan in laga doonayo murashax walba inuu 20 xildhibaan ka hayso taageero ayaa wuxuu sheegay in arrintaas ay uga fursan waayeen baarlamaanka ayna berri horgelin doonaan baarlamaanka, go’aankii la gaarana la shaacin doono.
Xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya ayaa waxaa u taagan murashaxiin fara badan oo Muqdisho kawada olole xoog leh, waxaana murashaxiintaas ka mid ah siyaasiyiin fara badan oo mid walba uu hanqal kaga jiro inuu xafiiska madaxweynaha fariisto.
Liiska Xildhibaanada caawa la shaaciyey iyo beelahooda. Shakaalkiyo xargihii goosatee iyo goosgoos siyaasadeed!! Categories
Featured, Wararka maanta Tags
xusuus Add a Comment on "Gudiga doorashada iyo shuruudaha musharaxiinta oo nababar ku noqday"
Sh. Cali Dheere oo ku faanay weerarkii shalay isla markaana ku goodiyey Xidigaha Muqdisho Saciid Daa’uud Cali Masxaf iyo Surqo C/laahi Surqo yareey oo hees macaan oo muuqaal qurux badan leh soo bandhigay. Nolosha M.Katrineholm iyo Soomaalida, DAAWO VIDEO CSN OO DABAGAL KU HEYSA ARDAY DEYMO KA QAATAY OO AAN…. EU oo sheegtay ciidamada Soomaaliya in lagu tabarayo gudaha wadanka Soomaaliya Search for:
Recent Posts	Sh. Cali Dheere oo ku faanay weerarkii shalay isla markaana ku goodiyey
Sh. Cali Dheere oo ku faanay weerarkii shalay isla markaana ku goodiyey News In English
Sh. Cali Dheere oo ku faanay weerarkii shalay isla markaana ku goodiyey warar